काठमाडौं, २२ वैशाख । नेपाली कांग्रेसका नेता तथा पूर्व स्वास्थ्यमन्त्री गगन थापाले विकराल बनिरहेको कोरोना महामारीविरुद्ध जुध्न सरकारलाई केही सुझाव प्रस्तुत गरेका छन् । बुधबार सामाजिक सञ्जालमार्फत् केही सुझावहरु प्रस्तुत गर्दै उनले भनेका छन्, ‘स्वास्थ्य प्रणाली भनेको भौतिक पूर्वाधार र शैया मात्रै होइन, जनशक्ति सवैभन्दा महत्वपूर्ण पक्ष हो ।’
उनले स्वास्थ्यकर्मीको सुरक्षा र प्रोत्साहको प्याकेज बनाउन आग्रह गरेका छन् ।
हेर्नुहोस् थापाको सुझाव सरकारलाई-
धेरै अस्पतालमा उपकरण र पूर्वाधार भएर पनि जनशक्तिको अभावमा सेवा प्रवाह हुन सकेको छैन। यो राष्ट्रिय विपदमा जोखिम मोलेरै पनि काम गर्न स्वास्थ्यकर्मी तयार छन, गरिरहेका छन। त्यसका लागि तत्काल देहाय बमोजिमको व्यवस्था गर्न म सरकारसंग विनम्र आग्रह गर्दछु।
१). अत्यन्त अफ्ठ्यारोमा पनि दिनरात नभनि स्वास्थ्यकर्मीहरू २४सै खटिरहेका छन। अहिले अग्रभागमा लडिरहेका जनशक्तिलाई सुरक्षा र प्रोत्साहन सुविधा उपलव्ध गराउने कुरामा कुनै कन्जुस्याई नगरौं। निजी स्वास्थ्य संथामा कार्यरत जनशक्तिलाई पनि व्यवस्थापन र सरकारबाट थप सुविधा र सुरक्षा पाउने कुराको सुनिश्चितता गरौं।
२). थप जनशक्तिका सन्दर्भमा अहिले करार वा दैनिक ज्यालादारी काम गर्न आउनुहोस भनेर मन्त्रालय र अन्तर्गतका निकायले सुचना निकालेर मात्र हुँदैन। सुरक्षा र प्रोत्साहनको प्याकेज बनाऔं र आव्ह्वान गरौं।
(क) हाल झण्डै ५ हजार योग्य चिकित्सक PG को तयारी गरिरहेका छन। परीक्षा कहिले हुन्छ भन्ने ठेगान नहुँदा उनीहरू अलमलमा छन। परीक्षाको तालिका केही महिना पछि सारेर परीक्षाको तयारीका लागि पछि निश्चित समय दिने हो भने त्यो जनशक्तिलाई कोरोना महामारी रोकथाममा परिचालन गर्न सकिन्छ। यसरी जोखिममा काम गर्नेलाई PG मा कार्य अनुभवको थप अंक पाउने गरी नियममा विशेष व्यवस्था गरौं।
(ग) हाम्रो स्वास्थ्य प्रणालीमा लामो समय काम गरेर निवृत्व भइ वसेका, अध्ययन सकेर रोजगारीको पर्खाइमा रहेका चिकित्सक र स्वास्थ्यकर्मीको योग्यता र अनुभवलाई संकटमा परिचालन गर्न प्याकेज वनाऔं। त्यस्ता जनशक्तिलाई राष्ट्रिय पुलमा समावेश गरी अभाव भएको स्थानमा सही तरिकाले परिचालन गरौं।